Google tinyere ngwa ngwa izipu ozi ya n'okpuru otu egwuregwu | Gam akporosis
Otu otu na-eduzi ozi izi ozi na ngwa nkwukọrịta Google
Ọ bụrụ na e nwere otu Google nwere nnukwu ọgbaghara, ọ nọwo na izi ozi na nkwukọrịta. Ugbu a ị chọrọ ka ọ dị iche site n’itinye otu otu mmepe iji duru ma jikwaa ụdị ngwa ndị ahụ.
Nnukwu njem site na Google iji hụ ma ọ bụrụ na ha na-enweworị ikike ozugbo na ihe niile na ha nwere usoro nke ngwa nke na-aga na ebumnuche a kapịrị ọnụ; unu bahụkwaruphu ndu-ishi-ozi ọdo;
N'ezie anyị nwere 3 ngwa ngwa: Google Phone, Google Duo na Ozi Google. Nke mbụ bụ nke arụnyere na ndabara na ngwaọrụ Pixel na gam akporo Otu, nke abụọ bụ oku vidiyo dị maka onye ọ bụla na Storelọ Ahịa Play, na nke atọ bụ ngwa SMS na RCS site na ndabara maka ụfọdụ mobiles, ọ bụ ezie na ọ bụkwa maka onye ọ bụla na Google Play.
Anyị nwekwara nzukọ Google na Nkata maka ndị ahịa G Suite. Na ebe a ọ na-abata Javier Soltero onye emere VP na GM nke G Suite n’afọ gara aga, na nke ahụ dịkwa n’azụ azụghachi nke Mgbakọ Hangouts na Nkata. Ọ bụ ugbu a mgbe Google etinyela ya n'ihu ndu nke ekwentị, Duo na Ozi.
Ruo taa onye ọ bụla na-eduzi ngwa ndị a site na otu ndị ọzọ na-adabereghị na ndị ọzọ. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ụfọdụ ọ na-aga n'ihu otu a, n'ihi na ha ga-anọgide na-enwere onwe ha, echiche na nghọta Delgado ga-eduzi ha.
N'eziokwu Google ekwuputala na ebumnuche nke ịme ka ndị mmadụ niile dị n'otu Ọ bụ n'ihi na-emeso dị iche iche oghere na nke ndị a ngwa ọdịnala ga-enwe ebe. Ka anyị ghara ịtụ anya nnukwu mgbanwe na obere oge, a ga-eme ihe nwayọ iji weta ngwa ndị a na ebumnuche nkịtị nke ịnye ahụmịhe zuru oke na ọkwa nke izi ozi na nkwukọrịta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu otu na-eduzi ozi izi ozi na ngwa nkwukọrịta Google
Nokia 6.3 ga-abata na Snapdragon 670/675 na igwe ojii quad ZEISS
LG Velvet: Iwu tupu ịmalite taa na Korea